Flatpak ikozvino inobvumidza zviitiko zvekuvhara uchishandisa iyo 'kuuraya' rairo | Linux Vakapindwa muropa
Flatpak ikozvino inobvumidza yekuvhara zviitiko uchishandisa iyo 'kuuraya' kuraira
Flatpak anovandudza Alex Larsson aburitsa vhezheni nyowani yeiyi huru sandboxing app iyo inovimbisa kuve ramangwana rekuparadzirwa kweapp muLinux flavors.
Flatpak 1.1.0 inowanikwa izvozvi, ichiunza mukuvandudzwa kweFlatpak 1.2 nhepfenyuro, iyo inotarisirwa kusvika gore risati rapera, ichivimbisa maficha nyowani uye zvigadziriso kuita kuti ruzivo rwePlppak ruve nani kubva kumativi ese.
Mukusunungurwa uku, timu yekusimudzira Ini ndinoshandisa iwo mutsva murairo "Flatpak kuuraya" kuitira kuti vashandisi vavhare zviitiko zveFlatpakKupfuurirazve, iyo - - nharo iri kure yatove yakasarudzika mu "flatpak install" rairo yekudyidzana kuisirwa, kana uchiishandisa unogona kusarudza kero iri kure kuti uise iko kunyorera.
Kune rimwe divi, Flatpak 1.1.0 inowedzera rutsigiro rwe - - makoramu sarudzo kune ese tafura yekudhinda mirairo kuitira kuti vashandisi vagone kutsanangura chaizvo zvavanoda kuona, tsigiro ye - - inoita nharo yeiyo "flatpak repo" kuraira kunyorera inoita, pakupedzisira, rutsigiro rwe - - info nharo inoratidza ruzivo nezve iyo Flatpak repository.
Iwo "Flatpak rondedzero" rairo rakagadziridzwa kutsigira kumhanya-nguva kusefa uye iyo "Flatpak uninstall" rairo ikozvino inotsigira iyo - - Dele--data nharo iyo inobvumidza vashandisi kudzima madhairekitori ekushandisa mufaira remubereki. Kana iko kunyorera kusinga tsanangurwe, iyo data yezvose zvisina kubviswa kunyorera ichabviswa.
Flatpak 1.1.0 inotora nhanho kubva kuFlatpak 1.2 yakateedzana. Haufanire kuisa Flatpak 1.1.0 pane yako distro kuti unakirwe nezvitsva, asi unogona kurodha tarball kana iwe uchida kuyedza. Tinokurudzira kuti iwe umirire Flatpak 1.2 usati wavandudza kune iyo 1.0 nhevedzano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Flatpak ikozvino inobvumidza yekuvhara zviitiko uchishandisa iyo 'kuuraya' kuraira
OrbitalApps: nzira yekuve inotakurika mafomu muLinux
ReactOS, iyo 'yemahara' Windows dombo, ikozvino inogona bhuti kubva kuBtrfs disks